သန်းထိုက်ဦး| December 14, 2012 | Hits:1
Chindits December 15, 2012 - 1:13 am Where is PEACE? How can they ignore PRESIDENT order to stop attacking KIO?
Reply Chindits December 15, 2012 - 1:35 am Min Aung Hlaing should be investigated and arrested by PARLIAMENT for ignoring PRESIDENT”S order not to attack.
Reply Shwe Yoe December 15, 2012 - 7:16 am Well! Guns and Bullets will never solve our political problems. More lives including the soldiers will be lost forever. The path on which the Thein Sein administration is leading us will end up in graveyard.
Reply မြန်မာပြည်သား December 15, 2012 - 12:58 pm စစ် တပ်က ဘုန်းကြီးတွေ ကို နှပ်ပြီးရင် တိုင်းရင်းသားတွေကို သတ် ဒါတွေပဲလုပ်တတ်တယ်။
Reply ohnmar December 15, 2012 - 1:49 pm KIA ကကချင်တစ်မျိုးလုံးကိုကိုယ်စားပြုတယ်လို့ကချင်လူမျိုးတွေကခံယူထားရင်
Reply ပေါက်စ December 15, 2012 - 11:05 pm ညီမလေး မှားနေပြီ။ တရုတ်ဖျောင့်ဖြလို့မဟုတ်ဘူး။ KIO ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို နိုင်ငံရေးဘောင်ထဲမှာရသလောက်ကြိုးစားမယ်
Reply မြန်မာ December 15, 2012 - 2:42 pm ယနေ့မြန်မာစစ်တပ်ဆိုတာ အိမ်ကျယ်အဆင့်ပဲရှိပါတယ်။ ပြည်သူနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကို လက်နက်အားကိုးနဲ့ အနိုင်ကျင့် မတရားကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာ ဒါပဲလုပ်တတ်တာ။ အဲ…ပြည်ပတပ်တို့၊အဖွဲ့အစည်းတို့နဲ့တွေ့ရင်တော့ ခံခဲ့ရတာချည်းပါပဲ။
Reply Aung Khin December 15, 2012 - 3:44 pm KIA တရုတ်အားကိုးပြီး လေကျယ် မိုင်းခွဲ ဆက်ကြေးကောက်
Reply Chindits December 16, 2012 - 6:18 am Your accusation on KIA have no prove.
Reply pps12345 December 16, 2012 - 10:19 am တရုတ် အားကိုး တာ ၊ လက်နက်မဲ့ တွေတော် သေနတ် နှင့်ပစ်တာ၊ သားစဉ်မြေးဆက် ကောင်းစားနေတာ အားလုံးက တပ်မတော် အရာရှိ ကြီးတွေ နှင့် သူတို့ အပေါင်း အသင်းများသာ………..။ တိုင်းပြည်ကတော့ သခင်အောင်ဆန်းပြောခဲ့ သလို ဖာသည် တိုင်းပြည် ဖြစ်နေပြီ။ ချဟေ့ အန်တီစု ပြောသလို ဘယ်လို မိသားစုက ပေါက်ဖွား လာခဲ့သလဲ ဆိုတာ……..
Reply ပါကြီးဖိုး December 15, 2012 - 4:44 pm အသေခံတိုက်ရသူတွေက နှစ်ဖတ်စလုံးက အောက်ခြေရဲဘော်တွေပါ။ မြေဇာပင်ဖြစ်ရတဲ့သူတွေက အပြစ်မဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားများနဲ့ ပြည်သူတွေပါ။ နှစ်ဖတ်စလုံးက ပစ်ခတ်နေကြတဲ့ လက်နက်တွေနဲ့ ကျည်ဆံတွေက ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေနဲ့ ဝယ်ရတာပါ။ မြန်မာပြည်အတွက် အားလုံးအရှုံးတွေချည်းပါပဲ။ စစ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး အမြတ်ထွက်တဲ့ လူနည်းစုလည်း ရှိနေပါတယ်။ စစ်ကြောင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေကြရတာဟာ လူနည်းစုရဲ့ ကိုယ်ကျိုးအတ္တကြောင့်ပါပဲ။
Reply KoYe20 December 15, 2012 - 9:40 pm KIA စခန်းတွေ အားလုံးကျသွားလဲ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ဆက်လုပ်လို.ရပါတယ်။ ဘာလို.လဲဆိုတော့ လူကြီးတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ.မိသားစုတွေက တခြားနိုင်ငံ တွေမှာထားတာလေ။ ကြိုးစားထားကြ KIA ရဲဘော်တို.ရေ၊ တို.လူကြီးတွေ မင်းတို.ကိုကြည့်မနေပါဘူး။ဝေ့လည်ကြောင်ပါတ် ဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လုပ်ပါဦးမယ်။ လောလောဆယ်တော့—?
Reply Tun Tun Ko December 15, 2012 - 10:17 pm မြန်မာ့တပ်မတော်မှာတော့ ၁၉၈၀ ခုနှစ် တွေကတည်းက Carlgustav တွေသုံးနေတာဘဲ။ ကပစ ကလည်း BA 84 အနေနဲ့ထုတ်တာဘဲလေ။ တပ်ရင်းအကူပစ်လက်နက်ကြီးအဖြစ် သုံးလာတာ ဆယ်စုနှစ် (၃) ခုလောက်ရှိပြီဘဲ ။ သူတို့ကဘာလို့ အခုမှတရေးနိုးနေရတာလဲ ?
Reply pps12345 December 16, 2012 - 10:15 am တပ်မတော် အရာရှိကြီး တစ်ဥိး၏ ပြောကြားချက် အရ ထို ၈၄ မမ များကို ဦးနေဝင်းလက်ထက် ၁၉၈၃ ခုနှစ်လောက်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှ တိတ်တိတ် ပုန်းထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုလက်နက်များကို အစိုးရ တပ်များက KNU တပ်များကို တိုက်ရာတွင် သုံးခဲ့သဖြင့် တပ်မှုးတစ်ယောက် ထိုစဉ်က ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရကြောင်သိရပါသည်။ သို့သော် နဝတ လက်ထက် မဲသဝေါ၊ မော်ဖိုးကေ၊ မာနယ်ပလော နှင့် မဲလ စခန်းများ ကို တိုက်ရာတွင် ကွန်ကရစ် ဘန်ကာများကို ဖြိုခွင်း ရန် ထိုစဉ်က စစ်ရာထူးခန့်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မောင်လှ၏ အမိန့်ဖြင့် ထုတ်သုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ ထို့နောက် SSA စခန်းများကို ဖြိုခွင်းရန် ဒုချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သူ မောင်အေး အမိန့်ဖြင့် ထုတ်သုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ် အစိုးရ လက်ထက်တွင် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ကို ဦးစားပေးခဲ့၍ ပြည်တွင်းစစ် တွင် ထိုကဲ့သို့သော လက်နက်များကို ထုတ်မသုံးခဲ့သော်လည်း နဝတ လက်ထက်တွင် မောင်လှ နှင့် မောင်အေး ကဲ့သို့သော စစ်ခေါင်းဆောင်များက တိုင်းရင်းသားများကို မျိုးဖြုတ် သတ်ဖြတ်ရန် ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။